#सामाजिक सञ्जाल | Suvadin !
सामाजिक सञ्जालमा कसी : अभिव्यक्ति स्‍वतन्‍त्रता खुम्चाउँदै सरकार
काठमाडौं । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जसको चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । यस विधेयकप्रति प्रमुख प्र...
अघोरी बाबा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका अघोरी बाबा उर्फ विजय केसी पक्राउ परेका छन् । केसीमाथि ठगी गरेको आरोप लागेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले नियन्त्रणमा लिएको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार बाबाले विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको उजुरी परेपछि...
एजेन्सी । विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले आफ्नो प्लेटफर्मबाट राजनीतिक विज्ञापन स्वीकार नगर्ने बुधबार घोषणा गरेको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना प्रवाह हुने गरेको भन्दै सबै क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भएपछि उक्त निर्णय गरिएको ट्वीटरले जनाएको छ । ट्वीटरका प्रमुख कार...
सामाजिक सञ्‍जाल पनि डिप्रेसनको कारण !
एजेन्सी । हामी सामाजिक सञ्‍जालको व्यापक प्रयोगकर्ता बनेका छौं । त्यही माध्यामबाट हामी आफन्त, साथीभाईसँग भलाकुसारी गर्छौं । एकअर्काको हालखबर बुझ्छौं । तर, यतिमा मात्र पनि सीमित छैनौं । सामाजिक सञ्जालमा हामी यति लिप्त भएका छौं कि, मानौं त्यही नै हाम्रो संसार हो । त्यही हाम्रो खुसी हो । त्यही नै हा...
वाशिङटन । सामाजिक सञ्‍जालको एप्स फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम र ह्वाट्स एपमा देखिएको समस्या करिब आठ घण्टा समाधान भएको छ । यो एप्स पुरै ठप्प नभएपनि यसका केही फिचरमा समस्या देखिएको थियो । फेसबुकले यस कम्पनीका एपमा देखिएको समस्या हटिसकेको जनाएको छ । यो एप्सका साथ मुख्य समस्या तस्बिर र भिडियोलाई लिएर भइरह...
तेस्रोपटक फेसबुक, ह्‍वाट्‍स एप र इन्स्टाग्राम 'डाउन'
काठमाडौं । सन् २०१९ मा सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुक, ह्वाट्स एप तथा इन्स्टाग्राममा तेस्रो पटक समस्या देखिएको छ । सन् २०१९ भित्रै सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकसहित फेसबुक इन्क कम्पनीका उत्पादनहरूमा प्राविधिक समस्या आएको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि पनि तीन महिनाअघि फेसबुक, म्यासेजिङ एप ह्...
DilipKarki 567 0
सामाजिक सञ्‍जालमा सभ्य संस्कारको खडेरी
काठमाडौं । सामाजिक सञ्‍जालको विकास र विस्तारले सूचना प्रविधिको युगमा नयाँ आयाम थपिदिएको छ । विश्‍वलाई एक ग्राममा परिणत गरिदिएको छ । विश्‍वका जुनसुकै कुनामा रहेका व्यक्तिलाई सहज पहुँच स्थापित गरिदिएको छ । सामाजिक सञ्‍जालले संसारलाई सानो गाउँ बनाइदिएको छ। जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीले य...
अब अमेरिकाको भिसा लिँदा सामाजिक सञ्‍जालको रेकर्ड बुझाउनुपर्ने
वाशिङटन । अमेरिकी भिसाको लागि अब आवेदकले सामाजिक सञ्जालको रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो नियममा आवेदकले सामाजिक सञ्जालको नाम, ५ वर्ष यताका इमेल ठेगाना र फोन नम्बर पनि बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ । यो नियम गएको वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । यो नियमले वार्षिक...
DilipKarki 221 0